(၈)တန်းကျောင်းသူလေးအား ညာခေါ်ပြီး သားမယား ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား - MM Live News
(၈)တန်းကျောင်းသူလေးအား ညာခေါ်ပြီး သားမယား ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
၈တန္းေက်ာင္းသူ အား ညာေခၚၿပီး ျပဳက်င့္ေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ပြား
အသက္၁၃ႏွစ္၈လရွိၿပီး ၈တန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးကို ရဲပါးကုန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမား တစ္ဦးက စာသင္ေပးမည္ဟု ညာေခၚသြားၿပီး သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သျဖင့္ အဖြားျဖစ္သူကရဲစခန္းကို တိုင္ၾကားထားၿပီးသက္ငယ္မုဒိမ္းမႈျဖင့္ရဲကအမႈဖြင့္စစ္ေဆးေနသည္
ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ သဲျဖဴကုန္းေက်း႐ြာ ရဲျပားကုန္းတြင္ ေနသူ မ xxxx သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ည၈နာရီက အဖြားျဖစ္သူနဲ႔ထမင္းစားၿပီးေနာက္ အိမ္ကေပ်ာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ည၁၀နာရီထိ ျပန္မလာ၍ လိုက္ရွာစဥ္ အိမ္ေရွ႕လမ္းမေပၚ၌ျပန္ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း…..
မ xxx အားဘယ္သြားေနလဲဟုေမးျမန္းခဲ့ရာ ရဲပါးကုန္းစာသင္ေက်ာင္းသစ္ေဆာက္ေနေသာလုပ္ငန္းမွ လုပ္သား ျဖစ္သူ ခ်စ္မင္းကို ၁၉ ႏွစ္ (ဘ)ဦးၾကည္ဝင္း ၉ရပ္ကြက္ ခလိုက္သစ္႐ြာ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕ေနသူက စာသင္ေပးမည္ဟုေျပာဆိုေခၚသြားၿပီး….
ေက်ာင္းေဆာင္ေအာက္ထပ္၌သားမယားျပဳက်င္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသျဖင့္ မ xxx ၏အဖြားျဖစ္သူ ေဒၚခင္မာၾကည္မွ မုတၱမနယ္ေျမရဲစခန္း သို႔တိုင္ၾကား ခဲ့ရာ ရဲစခန္း က (ပ)၁၂၃၄/၂၀၁၉ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးကာ တရားခံအားဖမ္းဆီးထားေၾကာင္းသိရသည္။
၈တန်းကျောင်းသူ အား ညာခေါ်ပြီး ပြုကျင့်သော သက်ငယ်မုဒိမ်းဖြစ်ပွား
ပေါင် ဒီဇင်ဘာ ၃
အသက်၁၃နှစ်၈လရှိပြီး ၈တန်းကျောင်းသူ တစ်ဦးကို ရဲပါးကုန်းကျောင်းဆောက်လုပ်နေသော အလုပ်သမား တစ်ဦးက စာသင်ပေးမည်ဟု ညာခေါ်သွားပြီး သားမယားပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့် အဖွားဖြစ်သူကရဲစခန်းကို တိုင်ကြားထားပြီးသက်ငယ်မုဒိမ်းမှုဖြင့်ရဲကအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေသည်
ပေါင်မြို့နယ် သဲဖြူကုန်းကျေးရွာ ရဲပြားကုန်းတွင် နေသူ မ xxxx သည် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့ည၈နာရီက အဖွားဖြစ်သူနဲ့ထမင်းစားပြီးနောက် အိမ်ကပျောက်သွားခဲ့ကြောင်း ည၁၀နာရီထိ ပြန်မလာ၍ လိုက်ရှာစဉ် အိမ်ရှေ့လမ်းမပေါ်၌ပြန်တွေ့ခဲ့ကြောင်း…..
မ xxx အားဘယ်သွားနေလဲဟုမေးမြန်းခဲ့ရာ ရဲပါးကုန်းစာသင်ကျောင်းသစ်ဆောက်နေသောလုပ်ငန်းမှ လုပ်သား ဖြစ်သူ ချစ်မင်းကို ၁၉ နှစ် (ဘ)ဦးကြည်ဝင်း ၉ရပ်ကွက် ခလိုက်သစ်ရွာ ချောင်းဆုံမြို့နေသူက စာသင်ပေးမည်ဟုပြောဆိုခေါ်သွားပြီး….
ကျောင်းဆောင်အောက်ထပ်၌သားမယားပြုကျင်ခဲ့ကြောင်း ပြန်ပြောပြခဲ့ကြောင်းသိရသဖြင့် မ xxx ၏အဖွားဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မာကြည်မှ မုတ္တမနယ်မြေရဲစခန်း သို့တိုင်ကြား ခဲ့ရာ ရဲစခန်း က (ပ)၁၂၃၄/၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးကာ တရားခံအားဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရသည်။
တရုတ်ပြည်မှာ ရောင်းစားခံထားရတဲ့ မဝင်းမြတ်သူ လက်ရှိအခြေအနေ
လတ်တလော ခေတ်စားနေတဲ့လိမ်နည်း တစ်မျိုးပါ…..
ညဘက်ဖားရှာထွက်ကြရာမှ (၁၃)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား ဦးလေးဖြစ်သူမှ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်
December 5, 2019 MM Live